Owuo| Nea Bible Ka
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
“Woyɛ dɔte na dɔte mu na wobɛsan akɔ.”—Genesis 3:19.
Ebinom adwene yɛ wɔn sɛ, sɛ obi wu a ɔsan kɔtena baabi te sɛ ɛsoro, bonsam-gya mu, mfimfimmea anaa ahodwira-gya mu. Ebinom nso gye di sɛ, sɛ obi wu a, yɛsan wo no bio. Nanso wɔn a wɔnyɛ nyamesomfo no deɛ, wɔgye di sɛ, sɛ onipa wu a, na wawu.
Ɔsɛnkafo 9:10 ka sɛ: “Adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa biara nni Adamena mu a worekorɔ no.” Bible ma yehu baabi a nnipa ne mmoa nyinaa wu a wɔkɔ. Ɛka sɛ: “Wɔn nyinaa kɔ faako. Wɔn nyinaa firi dɔteɛ mu, na wɔn nyinaa san kɔ dɔteɛ mu.”—Ɔsɛnkafo 3:20.
Awufo—Wɔwɔ anigye mu anaasɛ wɔwɔ awerɛhow mu?
“Ne honhom fi kɔ, na ɔsan kɔ ne dɔte mu; da no ara, ne nsusuwii yera.”—Dwom 146:4.
Nnipa pii wɔ hɔ a, yɛakyerɛkyerɛ wɔn sɛ, sɛ obi wu a, deɛ ɔyɛɛ no wiase na ɛbɛkyerɛ deɛ obenya. Sɛ ɔyɛɛ adepa a, obegye n’ani afebɔɔ; odii bɔne nso a, wɔbɛteetee no daa. Nkurɔfo ka sɛ nnipa wu a, gye sɛ wɔprapra wɔn bɔne ansa na wɔatumi akɔ Onyankopɔn anim. Wɔsan ka sɛ, sɛ wɔampra obi bɔne a, saa anigye no bɛbɔ no.
Awufo nni anigye mu, na wɔnte yaw nso. Nokwasɛm ne sɛ awufo nnim hwee; deɛ ɛrekɔ so biara wɔnte. Enti wɔrentumi mmoa obi, na saa ara nso na wɔrentumi mpira obiara. Ɔsɛnkafo 9:5, 6 ka sɛ: “Ateasefo nim sɛ wobewuwu; awufo de, wonnim biribiara . . . Afei nso wɔn dɔ oo, wɔn tan oo, wɔn ninkuntwe oo, ayera dedaw, na wonni nea wɔyɛ owia ase biara mu kyɛfa bio.”
Anidaso bi wɔ hɔ ma awufo anaa?
“Sɛ ɔbarima wu a, ɔbɛtena ase bio? M’afiase nna nyinaa mɛtwɛn akosi sɛ me home bɛba.”—Hiob 14:14.
Nnipa pii gye di sɛ, sɛ obi nya kɔ bonsam-gya mu deɛ a, na waka hɔ; wɔbɛteetee no daa. Wogye di sɛ wɔn a wɔwɔ mfimfimmea no deɛ, sɛ wɔde gya no prapra wɔn bɔne wie a, na wɔkɔ soro akɔgye wɔn ani.
Sɛ obi wu a, ɔkɔda dinn. Akyiri yi, Onyankopɔn Ba no benyan wɔn a wɔawuwu no aba asase so bio. Bible ka sɛ: “Mommma eyi nnyɛ mo nwonwa, efisɛ dɔn no reba a wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte ne nne na wɔafi adi.” (Yohane 5:26, 28, 29) Sɛ obi nyane ba a, ne bra a ɔbɛbɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ obenya daa nkwa anaasɛ ɔrennya. *
^ nky. 14 Wopɛ sɛ wuhu owusɔre ho nsɛm pii a, yɛsrɛ wo hwɛ Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nhoma no ti 7. Yehowa Adansefo na wotintimii.
Sɛ yewu a dɛn na ɛba yɛn so? So yebehu yɛn adɔfo a wɔawuwu no bio?
Nea Bible Ka Fa Owuo Ho?